Italian Serie A | Goolasha.Net
Subscribe by e-mail	Follow us on Twitter	Connect on Facebook	Home » Archives by category » Italian Serie A
Macallin Allegri oo la abaal-marin doono haddii uu Champions League ka reebo kooxda Barcelona.
BOOQASHO: 21 TuttoSport ayaa daaha ka rogtay in Maamulka Juventus ay ku abaal-marin doonaan tababare Allegri in loo soo iibiyo laacibka PSG ee Angel Di Maria kaas oo haatan u muuqda mid niyad jab ka qaaday guul daradii Barcelona. Di Maria ayaa lagu heli karaa aduun dhan 50 milyan oo euro, Juventus ayaana diyaar ula […]
March 25, 2017No CommentRead More	Wargeysyada Iyo Wixii Ay Qoreen: Real Madrid Oo Chelsea Ku Wajahan ,Iyo Jose Mourinho Oo Xagaaga Dambe Suuqa aad uga Kalluunmeysanaya.
BOOQASHO: 584 Kulan Wacan Oo Wanaagsan Dhamaan Aqristiyaasha sharafta leh, meel kasta oo Dunida ka joogtan waxaan idin leenahay Jimco Wanaagsan. Aqristiyaal waxaan halkaan idinku soo gudbineyna wararkii ugu waa weeyna ee maanto jimco ah ay qoreen wargeeysyada. Real Madrid ayaa ku wajahan kooxda Chelsea, iyadoo Ujeedadeedu ay tahay inay kala soo […]
Continue reading …	Gianluigi Donnarumma oo ku guuleystay abaal marin qaali ah, xili uu ka dhax qaaday xiddigo badan.
BOOQASHO: 127 Xiddig-yaraha AC Milan ee Gianluigi Donnarumma ayaa qaatay abaalmarinta NxGn, oo uu Goal.com ku qiimeeyay 50-ka laacib ee da’yarta ah ee ugu hibada badan kubadda cagta. Goal ayaa arrintan hor dhigay khubaro kubadeed oo dunida kala jooga, iyadoo ay qiimayntu khuseeysay laacibiinta dhashay 1 bisha Jannaayo 1998 ama kaddib, iyadoo lagu qiimaynayay khibradda, […]
Continue reading …	Chelsea Iyo Real Madrid Oo Isku Heeysta Daafaca Buuxa ee Juventus Alex Sandro.
BOOQASHO: 179 Daafaca kooxda Juventus Alex Sandro ayaa lagu soo waramayaa in uu diirada u saaran yahay kooxaha Chelsea iyo Real Madrid. 26-sano jirkaan, ayaa u dhaliyay Juventus labo gool 23 kulan oo uu saftay horyaalka Serie A ee xilli ciyaareedkan. wuxuuna sanadkii 2015 kasoo dhaqaaqay kooxda Porto. Chelsea iyo Real Madrid […]
Continue reading …	Ciyaaryahanka Kooxda Lyon Corentin Tolisso Oo Ku Dhow Inuu Ku Biiro Kooxda Juventus.
BOOQASHO: 204 Kooxda Talyaaniga ee Juventus ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhowdahay inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka kooxda Lyon ee Corentin Tolisso. 22-sano jirkaan, ayaa sidoo kale hore loola xiriirinayay kooxaha kawada dhisan horyaalka Ingiriiska ee Arsenal iyo Chelsea. Xiddigan waxa uu u dhaliyay 11 gool tartamada oo dhan […]
Continue reading …	Man City Oo Diyaar U Ah Inay Miiska Saaran £130 Milyan Si Ay Usoo Qaatan Goolhaayaha AC Milan.
BOOQASHO: 185 Manchester City ayaa dooneysa inay lacag qaali ah kusoo iibsato Goolhayaha kooxda AC Milan Gianluigi Donnarumma . City ayaa isku diyaarineysa inay bixiso lacag badan oo dhan £ 130 milyan si ay Etihad u keento goolhaaye Donnarumma. 18-sano jirkaan waa kan ugu horeeya ee liiska ciyaartoyda xagaagan uu doonayo inuu […]
Continue reading …	Bauza: ‘Higuain waa dooqeyga koowad ee weerarka ‘
BOOQASHO: 208 Argentina macalinkeda Edgardo Bauza ayaa xaqiijiyay in Paulo Dybala uu ciyaari doono kulanka Chile, iyadoona Gonzalo Higuain uu ciyaari doono weerarka dhexe . Xiddigaha kooxda Juventus ayaa xulkooda kala qeeb gali doonan is reeb reebka koobka aduunka 2018 , iyadoona Dybala uu dhawac qabo . “Dybala waxa uu ciyaari doono kulanka Chile iyo […]
Continue reading …	Arsenal Iyo Chelsea Oo Ku Dagaalamaya Saxiixa Marcelo Brozovic?
BOOQASHO: 209 Arsenal iyo Chelsea ayaa isha kuwada haya ciyaaryahanka khadka dhexe ee Inter Milan Marcelo Brozovic, waxayna labada koox ay doonayan inay xagaaga u dhaqaaqdo ciyaaryahanka. Ciyaaryahanka heerka caalami ee Croatia ayaa lala xiriirinayay inuu ka tagayo kooxda ku ciyaarta San Siro ka dib markii dhowaan uu Wakiilkiisa Miroslav Bicanic uu shaaca ka […]
Continue reading …	Gianluigi Donnarumma Oo Doonaya Inuu Heshiiska U kordhiyo AC Milan.
BOOQASHO: 207 Gianluigi Donnarumma ayaa shaaca ka qaaday inuu doonayo inuu u saxiixo heshiis cusub oo waqti dheer ah kooxd AC Milan. Donnarumma ayaa noqday goolhayaha ugu da’da yar oo 16 ee abid ka ciyaara Serie A, waxaana uu tan iyo markii uu noqday kubad joojiye aad u fiican, imikana waa goolhaayaha ugu […]
Continue reading …	Tottenham Hotspur Oo Damacsan Inay Engaland Kusoo Celiso Garabka Kooxda AC Milan Suso?
BOOQASHO: 236 Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara AC Milan Suso ayaa lagu soo waramayaa inuu u muuqdo mid diirada uu u saaran yahay kooxda Tottenham Hotspur. Kooxda ka dhisan Waqooyiga London ayaa horay lala xiriirinayay ciyaartoy dhowr ah ka hor xagaaga, iyagoo doonaya inay xoojiyaan rajada dheer ee ku guuleysiga horyaalka Premier League markii […]
Continue reading …	Page 1 of 192123Next ›Last »	Home
Designed by Hosni Ict ?>